Lifestyle Archives - Page3of4- Chelmo News Portal
Stay Home ဆိုနေတော့ B သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၀၁. ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးတွေ ထလုပ်။ ဘာဖြစ်တာမှန်းမသိ၊ ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းသန့်ရှင်းရေးကို အကွက်ကျကျ ထလုပ်တတ်ပါတယ်။ သူက သန့်ရှင်းရေးသိပ်မလုပ်၊ ဖြစ်သလိုနေတတ်ပင်မယ့်လည်း လုပ်ပြီဆိုရင် သေချာလုပ်တတ်ပါတယ်။ ၀၂. လက်ပန်းကျတဲ့အချိန်အထိ လုပ်တယ်။ ...
တစ်ချို့သော သူတွေက သူတို့ မနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်တွေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လှောင်ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေ မေ့ပျောက်သွားဖို့မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်း ကလည်း သူတို့ကို အမြဲတမ်း စိတ်သောက ရောက်နေစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အမှားတွေနဲ့ ...
လူတိုင်း လစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကတော့ လမကုန်ခင် ပိုက်ဆံကုန်ပြီး ဒုက္ခအကြီးအကျယ် ရောက်တာပါပဲ။ ဒီလိုအခက်အခဲတွေမကြုံရလေအောင် ငွေကို ဘယ်လိုချွေတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁)တစ်နေ့တာ အသုံးစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ ပိုက်ဆံချွေတာဖို့အတွက် အသုံးဝင်ဆုံးအချက်က ကိုယ့်တစ်နေ့တာအသုံးစရိတ်ကို တွက်ချက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဒီနေ့ ဘာတွေဝယ်တယ် ဘာတွေသုံးသလဲဆိုတာကို စာရင်းဇယားမှတ်သားခြင်းအားဖြင့် ဘယ်နေရာတွေမှာ ကိုယ်ပိုက်ဆံပိုသုံးနေလဲဆိုတာသိရတော့ ...
တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူ Makeup Look တွေဟာဆိုရင်လဲ တစ်နှစ်နှင့်မတူဘဲပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာပါ 2020 မှာခေတ်စားလာဦးမယ့် Fashion တွေကိုပျိုမေများသိအောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် (၁) Glass Skin and Gloss Makeup look မိတ်ကပ်အထူကြီးတွေ Contourလုပ်တာတွေ 2019 မှာဘဲထားခဲ့လိုက်ပါတော့။ 2020ရဲ့ Trendsဖြစ်တဲ့ Makeupပါးပါးကြည်ကြည်လေးနဲ့Naturalဆန်တဲ့ ...